Ny mpamoaka sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny solosainao - Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Mazava ho azy, ny Adobe Photoshop no mpamoaka sary tsara indrindra, saingy misy vidiny ary izany no antony andehanantsika ampianaro ny mpamoaka sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny solosainao. Rindrambaiko maromaro izay hamela antsika maimaim-poana hankafy ny sasany amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny fampiharana Adobe.
Izany hoe, mpanonta sary hanitsiana ny loko na hanafoanana kilema hafa izany dia mety manana ny endrik'ilay sary na ilay tontolo izay tokony hanadiovantsika ny lanitra mba ho tsara kokoa sy tonga lafatra kokoa ilay sary. Hanao an'ity andiana tonian-dahatsoratra ity izay azo antoka fa hahazoanao tombony betsaka indrindra ianao.
Tonga dia mankany isika mpamoaka sary maimaim-poana tsara indrindra ananantsika amin'izao fotoana izao amin'ny PC. Fandaharana mivelatra feno loharano feno endrika izay manakaiky ny kinova maimaimpoana akaiky indrindra amin'ny fampiasa amin'ny Adobe Photoshop. Ary milaza fa tsy hadalana io, marina izany.
Manolotra fiasa bebe kokoa aza izy io noho ny safidy hafa fandoavam-bola toa ny fanohanana ny sosona, sarontava ary na plugins aza. Izany hoe, raha manao GIMP ianao dia hanana eo an-tananao na solosainao fitaovana matanjaka handaozana ireo sary ireo tsy mbola nisy toy izany.
Manolotra fiolahana sy haavo aza izy io ho an'ny retouch mifanohitra, manasongadina, ary toerana maizina sary iray hanovana azy araka ny sitrapony. Ary miresaka momba ny fitaovana saro-pantarina toy ny fitomboka izahay ary ahafahantsika manafoana ny kilema amin'ny sary raha mbola manana kanto kely izahay. Manaraka ny fahafaha-mamorona borosy manokana ihany koa, mampihatra ny fanovana ny fomba fijery na mampiasa ny fitaovana fifantina hendry.
Manjary a programa loharano misokatra Midika izany fa tsy hanana karazana dokam-barotra isika, toy ny fisian'ny vondron'olona mpampiasa izay mizara fampianarana, fika ary manome ny fanampiany. Fandaharana tsy azo resena ankehitriny raha ny fahitana ny fahalalahana amin'ny maha-mpamoaka sary azy. Tena ilaina.
Raha misy zavatra mampiavaka ny vahaolana Ashampoo dia ny fananana ireo safidy iray tsindry ireo hahafahantsika mitahiry asa ary manana sary vonona ny hitondra azy ireo hiasa na handray ny tiana amin'ny tambajotra sosialy. Raha ny marina dia manana tonian-dahatsoratry ny sary izay ahafahantsika manova sy mamerina mamerina ny sary mba tsy handany fotoana amin'ny tsirairay amin'izy ireo.
Tokony holazaina ihany koa ho lafy tsara izay manana interface madio be io ary tsy manome doka izany; eny, mila mizara ny mailakao ianao vao manomboka mampiasa Ashampoo Photo Optimizer.
Afaka manafatra sary iray manontolo mba hahafahantsika mihodina na manatanteraka retouching rehetra hampihatra azy amin'ny sary tsirairay. Izy io dia fampiharana izay, araky ny anarany dia natao mba "hanatsara" sy hitehirizana fotoana. Izy io koa dia manolotra safidy fanamorana ho an'ny mandeha ho azy ary koa ny fanitsiana ny loko an-tanana, mahatonga azy io ho fitaovana tsara ho an'ny tanjona sasany amin'ny fitenenana fanovana batch.
Mpanonta sary maimaimpoana izay azontsika avy amin'ny tranokalany ary ankoatry ny fahafahantsika mamerina mamerina maka sary azy dia manana malalaka ihany koa izy fitehirizam-bokin'ny sary rehetra azontsika ampiharina amin'ny antony maro samihafa. Izany hoe, ankoatry ny fanatsarana ny saripika ho tsara kokoa, dia ho afaka hampiasa azy ireo isika hananganana collage, fanasana na karazana antony manosika izay mahazatra antsika ankehitriny amin'ny tambajotra sosialy.
Raha atao teny hafa, miatrika a isika fitaovana manampy antsika hamorona atiny misy kalitao ho an'ny media sosialy sy maro hafa. Ankoatry ny kinova maimaim-poana, izay manolotra tahiry rahona 1GB (tandremo ity), dia manana famandrihana premium ihany koa. Na dia misy aza ny kinova maimaimpoana dia rariny kokoa noho izany ny fanatanterahana ireo fanitsiana ireo sy mampiasa karazany maro ao anaty.
Anisan'ireo fiasa amin'ny famerenana sary an-tsary antsika ny zava-drehetra karazana vokatra ho an'ny fiotazam-boaloboka, asio maranitra, saturation, mifanohitra ary maro hafa. Amin'ity lafiny ity dia tsy manana ireo fiasa mandroso kokoa ireo, fa editor maimaimpoana raha jerena; indrindra noho izay voalaza momba an'io trano famakiam-boky misy sary isan-karazany io.
Tsy ao anatin'ny taona vitsivitsy lasa intsony isika, fa sarotra kokoa ny mahita mpamoaka sary an-tserasera maimaimpoana raha nivoaka avy amin'ny fanta-daza ianao. Fotor dia ohatra iray amin'izany ary mitondra antsika amin'ny iray amin'ireo tsara indrindra aminy endri-javatra miaraka amin'ireo sivana avo lenta.
Eny amin'ireo Ny sivana ambaratonga premium dia manampy hery hampiarana azy amin'ny andianyMiatrika tonian-dahatsoratra maimaimpoana izay ananantsika ao amin'ny tranonkalany izahay ary avy amin'ny karazana fitaovana rehetra dia ahafahantsika manova ireo rakitra marobe miaraka amin'izay.
Mazava ho azy, tsy hahita fitaovana mandroso toy ny fitomboka na ny mpanitsy fotoana isika, noho izany dia mandeha amin'ny fomba tsotra kokoa ny zava-drehetra, fa matetika no matetika isika no mampiasa asa haingana. Marina izany manome haavo sy fitaovana miolakolaka, saingy tsy mahatratra ny fahasarotan'ny hafa fitaovana toy ny Affinity Photo, na dia karamaina toy ny Adobe Photoshop aza izy io.
fa ny toerana tena asongadiny dia ny fanovana andiany ary mametraka azy amin'ny ambaratonga avo kokoa noho ny fampiharana fanovana sary hafa na tranokala maimaimpoana. Raha nanana Ashampoo isika taloha, dia miankina amin'i Fotor hanapa-kevitra hoe iza no hampiasanao manomboka izao.
Raha tao amin'ireo tonian-dahatsoratry ny sary maimaimpoana teo dia hadinontsika kely ireo fiasa mandroso, miaraka amin'ny Photo Pos Pro dia mahita zavatra hafa mahaliana kokoa isika. ny mpamoaka lahatsoratra tsy dia fantatra amin'ny anarana hoe GIMP, fa ilay tsy maintsy raisina manomboka izao.
Na dia afaka manatsara ny kalitaon'ny interface GIMP hamela editera mihoatra ny marina. Fifanarahana voalamina tsara sy voapetraka tsara ka ny intuitive dia tena intuitive ary tsy manadino programa hafa momba ny fanafody izahay.
Miresaka momba izany isika fitaovana sarotra toy ny sosona sarontava ary koa ny fahaizana manova ny ambaratonga sy ny fiolahana; Ankehitriny dia ho fantatrao tokoa ny fomba hankasitrahana ireo fitaovana ireo hampidirina azy ireo isan'andro isan'andro. Tsy tsy ampy ihany koa ny safidy fanovana tsindry iray monja, noho izany dia mpamoaka sary maimaimpoana be dia be ity.
Mazava ho azy, manana fetra isika, ny kinova maimaim-poana amin'ity app ity dia mamela fotsiny sary manondrana misy refy 1.024 1.204 x XNUMX teboka.
Andao hanombohana amin'ny fanehoan-kevitra momba ny roa amin'ireo endri-javatra tsara indrindra: fanovana batch sy fanovana ny sary RAW. Ary raha avy amin'ny interface-ny dia afaka mahita rindrambaiko tena tsotra isika, rehefa mankany amin'ny menus-ny isika dia mahita fahasarotana somary somary somary somary somary somary somary somary somary sarotra kokoa hanazavana fa tsy mifandray amina programa fotsiny.
Afaka miresaka momba ny famoronana GIF isika, fampitambarana sary sy fiovam-po RAW, anisan'ireo hatsarany. Ka ity programa ity dia mampiasa ny menus-ny, saingy tsy manana ilay interface ilaina. Fandaharana mety ho tonga lafatra ho an'ny vao manomboka te-hanomboka amin'ny fanovana sary.
Ary eny, mety ho gaga ianao mahita Adobe manana tonian-dahatsoratra maimaimpoana, saingy ity no tsimbadika tranonkala voajanahary amin'ny Photoshop. Mazava ho azy, manohana fotsiny ny sarin'ireo sary JPEG izay tsy mihoatra ny 16MB rehefa manondrana na mitahiry izany amin'ny solosaintsika.
Ny tsara indrindra dia ny sehatra marobe ary raha avy amin'ny tranonkala fitetezana Miorina amin'ny Flash, azontsika atao ny misintona an'io fampiharana io amin'ny fitaovana finday Android na iOS hanohizana ny fanovana.
Fitaovana iray misy ny heriny, na dia mety miala amin'ny safidy hafa maimaimpoana toa ny mpamoaka sary aseho amin'ity lisitra ity aza izy. Ny tsara indrindra dia izany miasa tanteraka ary eo am-pelatanantsika ny asa tsara nataon'i Adobe hahafahanay manitsy sary.
Tsy manolotra fanohanana ny sosona, na karazana rakitra isan-karazany sy manana izany fetra 16MB izanyHo an'ny ambiny, izy dia rindrambaiko mahafinaritra miaraka amin'ireo kinova findainy.
antsika mandeha amin'ny zavatra mitovy amin'ny Canva amin'ny tanjony isika, satria hamela antsika hanova sary ary hitondra azy ireo any amin'ny tambajotra sosialy. Amin'izay dia hitantsika ny teboka tsara indrindra amin'ity rindrambaiko amin'ny HTML5 na Flash ity.
Anisan'ny fahaizany sasany ny afaka mampiasa fitehirizana rahona hanondrana sary toa ny Google Photos na Google Drive, na ny katalaoginao manokana hanovana sy hanovana azy ireo raha sitraponao.
Raha izany tsy manana ireo fitaovana mandroso rehetra ireo avy amin'ny safidy hafa toa ny mpanonta, saingy natao hamoronana atiny avo lenta ary avy eo entina any amin'ireo tambajotra sosialy.
iray hafa amin'ny programa fanovana sary tena ilaina ary izany dia avy amin'ny Windows. Inona no mitranga izay nalaina ho tsara kokoa noho ny tany am-boalohany ary afaka manana eo am-pelatanantsika ny karazana safidy rehetra hamerenana ireo sarintsika.
tolotra fanohanana plugin ary mety manana sosona mihitsy aza hahafahantsika manova sary amin'ny sehatra hafa. Mpanonta tena malina.
Paint.net dia mbola velona tokoa ary mbola safidy tsara hanovana sary sy zavatra hafa. Mihidy miaraka aminy isika ity lisitr'ireo tonian-dahatsoratra maimaim-poana ity ho an'ny PC-nay ary avy eto dia mamporisika anao izahay hanandrana ireo tena tsy fantatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Mpanonta sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny solosainao